Ingriiska oo furay safaaraddiisii Soomaaliya - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 25 Abriil, 2013, 19:23 GMT 22:23 SGA
Dawladda Ingriiska ayaa maanta si rasmi ah u furtay safaaraddeedii Somalia ee magaalada Muqdisho, ka dib markii xoghayaha arimaha dibada ee UK Willam Hague uu booqasho gaaban ku tegey halkaasi. Waxanu garoonka diyaaradaha kula kulmay madaxweynahe Xassan Sheikh iyo ra' isulwasaare Cabdi Faarax Saacid.
Arrimaha kale ee madaxdaasi ka wada hadashay waxa lagu sheegay inay kala ahaayeen horumarka cusub ee Soomaaliya iyo doorka muhiimka ah ee dawladda UK ku leedahay arrimaha Soomaaliya .
"Soomaaliya waxay gashay weji cusub oo horumarineed, caalamkuna waa inuu sidaas u ogaadaa" ayuu yiri Ra'iisal Wasaaraha oo William uga mahadceliyay booqashadiisa 2aad ee uu dalka Soomaaliya ku yimid. Waxaana uu Ra'iisal Wasaaruhu u sheegay wafida Ingiriiska ee uu Mr. Hague horkacayo in talaabada dawladda UK ee la xariirta booqashdan iyo furitaanka safaaradda UK yihiin mid tusaale u ah caalamka intiisa kale inay ku dhiiradaan inay dalka Soomaaliya yimaaddaan.
Kulanka Ra'iisal Wasaaraha Cabdi Faarax Shirdoon iyo Xoghaya Arrimaha Dibadda UK William Hague ayaa waxaa kale oo looga wada hadlay arrimaha xuquuqul insaanka ee la xariira kufsiga iyo xadgudubyada kale.
Dhanka kale Ra'iisal Wasaaraha iyo Xoghaya Arrimaha Dibadda ee UK ayaa ka wada hadlay muhiimadda shirka arrimaha Somaaliya ee London. Waxaana Ra'iisal Wasaaraha oo ay weheliyaan Wasiirka Arrimaha Dibadda Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan iyo Wasiirka Arrimaha Bulshada Maryan Qaasim ay xuseen in dawladda Soomaaliya ay ku han weyntahay shirka London. Waxaana ay sheegeen inay rajaynayaan in caalamku taageero qorshaha ku aadan Amniga iyo horumarka dalka ee dawladdu shirka London ka soo bandhigayso.